वामदेव गौतमले राष्ट्रपति भण्डारीसँग यसरी लिए बदला, ओली देशबाहिर हुँदा प्रचण्डसँग ‘लुरुक्क’ — Sanchar Kendra
वामदेव गौतमले राष्ट्रपति भण्डारीसँग यसरी लिए बदला, ओली देशबाहिर हुँदा प्रचण्डसँग ‘लुरुक्क’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले पूर्व एमाले नेतृ समेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग असोज ३ गते बदला लिएका छन् । तेस्रो संविधान दिवसका दिनका भण्डारीले दिएको डिनर पार्टीलाई गौतमले अस्वीकार गरेर बदला लिएका हुन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
गौतमले आफूलाई पेटको समस्या भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको पाटी बहिस्कार गरिदिएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यक्रम बहिस्कार गरेका नेकपाका नेता गौतम सोही राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वागत गर्न लुरुक्क पुगेका थिए ।
राति साढे ९ बजे विमानस्थलमा उत्रिएका प्रचण्डलाई गौतमले भव्य स्वागत गरे । त्यस दिन प्रचण्डलाई स्वागत गर्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायत विभिन्न मन्त्री र नेताहरू पनि विमानस्थल पुगेका थिए।
शीतलनिवास जान इन्कार गरेका नेकपाका प्रभावशाली नेता गौतम राति साढे ९ बजे काठमाडौं आइपुगेका प्रचण्डको स्वागतमा विमानस्थल पुगे भन्ने कुराले निकै चर्चा पाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग गरेको भद्र सहमति पालना नगर्दा गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छन् । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेपछि उनी ओलीभन्दा प्रचण्डसँग निकट छन् ।
गौतम विमानस्थल पुगेको घटनालाई लिएर शीतलनिवासले चासो लिएको चाहिँ होइन । बरु, त्यसैदिन बिरामीको बहाना बनाएर राष्ट्रपति कार्यालय नगएका गौतमले प्रचण्डलाई स्वागत गर्न विमानस्थल गएपछि यो विषयमा शीतलनिवासमा चर्चा चल्यो । गौतम नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीको मनमा चिसो पसेको एक नेताले बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले निवासमा रात्रिभोजको आयोजना गरेकी थिइन् । रात्रिभोजमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू निम्त्याइएका थिए । गौतम सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता हुन् । ९ सदस्यीय शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालयमा गौतम सदस्य छन् । त्यसबाहेक उनी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित ३ पटक उपप्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन् । उनी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका दावेदार पनि हुन् । तर, अझै सांसद बन्न सकेका छैनन् ।
गौतम रात्रिभोजमा सरिक भएनन् । काठमाडौंमै रहेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता रात्रिभोजमा सरिक नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट गौतमलाई फोन गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार गौतमले आफूलाई पखाला लागेको बताउँदै त्यही कारण आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । गौतमसहितका नेताहरूलाई अपरान्ह साढे ५ बजेको निम्तो दिइएको थियो । पखाला लागेको बताएकाले रात्रिभोजमा गौतमको अनुपस्थितिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले स्वभाविक रुपमा लियो ।
शीतलनिवासमा आयोजित रात्रिभोजमा सरिक भएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत नेकपा नेता त्यतैबाट साढे ९ बजे विमानस्थलमा ओर्लेका प्रचण्डलाई ‘रिसिभ’ गर्न पुगे । राष्ट्रपति भण्डारीका जनसम्पर्क हेर्ने स्वकीय सचिव हीरामणि आचार्यले आक्रोस थाम्न सकेनन् । शुक्रबार (५ असोज) गौतमको नाम उल्लेख नगरी आचार्यले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे, ‘मौनता साँधेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको ! यसले फाइदा गर्ला र ? ५.३० मा आउनु पर्दा छेरौटी लाग्ने, ९.३० मा बुझ्दा एयरपोर्ट भेटिने’ भनेका छन् ।
शुक्रबार साँझ फेसबुकमा लेखिएको सो स्टाटस शनिबार बिहानसम्म आचार्यले डिलिट गरिसकेका थिए । यो प्रकरणले के देखाउँछ भने, राष्ट्रपति कार्यालय र सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता गौतमबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर छैन । राजनीतिमा भण्डारीभन्दा गौतम निकै सिनियर नेता हुन् ।
२०७५ असोज ११ मा प्रकाशित ।